भिम रावलले निर्वाचन लड्दा प्रचण्डलाई फाईदा ! भिम रावलले निर्वाचन लड्दा प्रचण्डलाई फाईदा ! Canada Nepal
मोनीका सिंह मंसिर १४ २०७८
काठमाडौं । नेकपा एमाले को १० औं महाधिवेशन अहिले चितवनमा भईरहेको छ । आज महाधिवेशनको अन्तिम दिन निर्वाचन प्रक्रिया भर्खरै सकिएको छ भने केही क्षण मै मत गणना सुरु हुँदैछ ।
निर्वाचन हुँदै गर्दा अधिकांश नेताहरुले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै दोहोर्याउनु पर्छ भनिरहेको पाईएको छ । यो माहोल हेर्दा आजको निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीले नै जित्ने सम्भावना देखिन्छ । यत्ति बुझ्दा बुझ्दै भिम रावलले किन केपी ओलीसंग लड्न खोजे र उपाध्यक्ष पद किन स्वीकार्न खोजेनन् भन्ने प्रश्न महाधिवेशनमा उठिरहेको छ ।
भिम रावलले भने आफू लोकतान्त्रीक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन होस भन्ने पक्षमा रहेकाले निर्वाचनको माग गरेको बताएका छन् । तर भिम रावललाई के फाईदा केपी ओलीसंग हार्नुमा भन्ने जटिल प्रश्न अझै पनि तेर्सिएको छ ।
भिम रावलको योजना : पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई पराजित गर्ने
भिम रावलले निर्वाचनमा जानु भनेको पूर्व माओवादीका नेताहरु माथि आक्रमण गर्न खोज्नु हो भनेर पनि महाधिवेशनमा केही नेताहरुले टिप्पणी गरेका छन् । भिम रावल आफू उठेर पूर्व माओवादीका नेताहरुलाई सर्वसम्मत निर्वाचित हुनबाट रोक्न खोजेर निर्वाचन प्रक्रियाको माग गरेको अधिकांश नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।
भिम रावल कत्तै नेकपा एमाले पार्टी छोडेर माधव नेपालको पार्टी तर्फ जानलाई यो बखेडा निकालेका हुन् कि भन्ने सम्म चर्चा चलेको छ तर भिम रावलले क्यानडा नेपालसंग कुराकानीमा प्रष्टसंग भने, "हार जित भनेको निर्वाचनमा हुन्छ नै तर म कुनै पनि हालतमा पार्टी छोडेर जाँदिन ।" भिम रावलले आफू पार्टी छोड्न यो गरेको होईन भनेर प्रष्टसंग भनेका छन् ।
नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने भएपछी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मख्ख परेका छन् । श्रोतका अनुसार खुमलटारमा अहिले खुशी छाएको छ । भिम रावलले निर्वाचनको माग गरेपछि मुख्यत फाईदा प्रचण्डलाई हुने भएकाले प्रचण्ड खुशी भएको श्रोतले जनाएको छ ।
भिम रावलले निर्वाचनको माग गर्दा मुख्य तीन नेताहरुलाई असर पर्ने देखिएको छ । पूर्व माओवादीका तीन नेताहरुलाई निर्वाचनमा सर्वाधिक भोट ल्याउन र जित्न गार्हो पर्ने देखिएको छ । उपाध्यक्षमा राम बहादुर थापा 'बादल', सचिवमा टोप बहादुर रायमाझी र लेखराज भट्टलाई चुनावमा भोट ल्याएर जित्न गाह्रो पर्ने भएकाले प्रचण्ड खुशी भएका छन् ।
केपी शर्मा ओलीले यी तीन नेताहरुलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गराउने अठोट लिएका थिए र बन्द सत्रमा यी तीनको नाम समेत सुनाएका थिए । तर भिम रावल पक्षले निर्वाचनको दाबी गरेपछि प्रचण्ड अहिले मख्ख परेका छन् । खुमलटार निकट श्रोतका अनुसार निर्वाचनमा जाने भएपछी पूर्व माओवादीका नेताहरु पराजित हुने पक्का हो जसका कारण पनि प्रचण्ड खुशी छन् ।
"आफ्नो पार्टी छोडेर एमालेमा के के न गर्छु भनेर गएकाहरु अब निर्वाचनमा जित्नु असम्भव जस्तो हो । अब एमालेमा केन्द्रीय सदस्यमात्र हैसियत पाएपछि माओवादी छोडेको पिडा हुन्छ । अनि कि त माओवादीमा फर्किनु पर्यो कि त खुम्चिएरै बस्नुपर्यो । माओवादी छोडेपछिको हविगत के हुन्छ देखिने भयो भनेर प्रचण्ड मख्ख हुनुहुन्छ ।"
यो संगै अर्को कारण प्रचण्ड खुशी हुनुको कारण उल्लेख गर्दै भने, "प्रचण्डलाई अहिले तनाब अर्को छ । धेरै नेताहरु माओवादी छोडेर एमालेमा जान्छौ भन्दै धम्की दिन थालेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठले त केपी ओलीसंग भेटि पनि सक्नु भयो भन्ने सुनेका छौं । अब माओवादी छोडेर जानेको हविगत के हुन्छ भन्ने यो निर्वाचनबाट देखिने भएकाले प्रचण्ड खुशी छन् । अब माओवादीमा एमाले जान्छौ भन्ने धम्की दिने कम हुन्छन ।"
यदी राम बहादुर थापा 'बादल' सहितका यी तीन नेताहरु निर्वाचित भए भने माओवादी केन्द्रबाट अरु थप असन्तुष्ट नेताहरु एमाले प्रवेश गर्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले यो निर्वाचनबाट यी तीन नेताहरुले ठाउँ नपाउँदा पूर्व माओवादीका नेताहरु छोडेर नजाने भएकाले प्रचण्ड अहिले खुशी भएका छन् ।
मंसिर १४, २०७८ मंगलवार ११:५१:०२ बजे : प्रकाशित
प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको शर्त : गठबन्धन फ़ुटाउनुस अनि मात्र म संग आउनुस
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए तर केपी शर्मा ओलीले उल्टै आफ्नो शर्त सुनाएर पठाएका छन् ।
बालुवाटार फर्किएपछी प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट एक नेतालाई ओलीको शर्त बारे सुनाएका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आईसोलेसनमा रहेको बेला केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका हुन् । हिजोको भेटमा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन फुटाए अहिले नै एमाले पार्टीले साथ दिने शर्त राखेका छन् ।
अहिलेको सरकारले नियतबस एमाले पार्टी फुटाएर माधव नेपाललाई सरकारमा लगेको र यसमा सभामुखले समेत साथ दिएको कारण एमाले पार्टी चूप नबस्ने कुरा राख्दै ओलीले भने, "तपाई प्रधानमन्त्री भएकोमा गुनासो होईन । यो गठबन्धनले एकतर्फी एमालेमाथी हान्न थालेको छ र यसमा नेपाली कांग्रेस र तपाई प्रयोग हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री नै बन्न यो गठबन्धनको साथ किन चाहियो ? गठबन्धन फ़ुटाउनुस एमाले पार्टीले साथ दिन्छ अनि चुनाव तपाई कै नेतृत्वको सरकारले गर्नुस । अब गठबन्धन फ़ुटाउनुस अनि मात्र म संग कुरा गर्न आउनुस ।"
केपी ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई सुनाएको कुरा देउवाले निराश हुँदै आफू निकटलाई सुनाएका थिए । केपी ओलीले एमसीसीको बारेमा पनि अहिले आफू कुनै धारणा नराख्ने बताएको समेत देउवाले उल्लेख गरेका छन् । ओलीले एमसीसी बारे भने, "तपाई पहिला गठबन्धनमा एउटै साझा धारणा बनाउनुस न अनि प्रतिपक्षको धारणा सोध्नुस । तपाईहरु नै अन्योलमा हुँदा हाम्रो धारणाको के अर्थ हुन्छ र ? गठबन्धनमा साझा धारणा खोज्नुस ।"
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद अवरोध र एमसीसी बारे एमालेको साथ खोज्न बालकोट पुगेका हुन् । प्रचण्डकै सल्लाहमा देउवा बालकोट पुगेका हुन् । प्रचण्ड आफै समेत जाने कुरा गरेका थिए तर कोरोना संक्रमणका कारण आईसोलेसनमा रहेका प्रचण्ड बालकोट पुग्न सकेनन् ।
केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई साथ नदिने देउवा समक्ष खुलस्त पारेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री दिन तयार तर गठबन्धन फुट्नुपर्ने माग केपी ओलीले देउवा समक्ष राखेका छन् ।
पौष २५, २०७८ आइतवार १३:५५:१८ बजे : प्रकाशित
दुर्गा प्रसाईं र केपी ओलीको देश दौडाहा, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रसाईंको अठोट
काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईंले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अठोट सहित देश दौडाहा सुरु गरेका छन् । भोली खाँदबारीमा हुने कार्यक्रमबाट ओली र प्रसाईंले देश दौडाहा सुरु गरेका छन् ।
दुर्गा प्रसाईंले केन्द्रीय सदस्य बनेसंगै आफू अब निर्वाचन मार्फत एमालेलाई एक नम्बर पार्टी बनाउने र केपी शर्मा ओलीलाई ५ वर्षको लागि प्रधानमन्त्री बनाउन देश दौडाहामा लाग्ने योजना सुनाएका थिए । केपी शर्मा ओली जस्तो विकासको भिजन भएको अरु कोही नेता नभएको कारणले देशमा परिवर्तन ल्याउन एकपल्ट ओलीलाई मौका दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै प्रसाईं देश दौडाहामा लाग्ने भएका छन् ।
नारायणहिटी विवाद देखाएर लिपुलेकको मुद्दा ओझेल पार्दै गठबन्धन सरकार
आज झापाबाट खाँदबारी पुगेका नेता प्रसाईंले केपी ओलीलाई भोली स्वागत गर्नेछन् भने खाँदबारीमा हुने कार्यक्रममा ओली र प्रसाईंले सम्बोधन समेत गर्नेछन् । केपी ओली किन फेरि प्रधानमन्त्री हुन आवश्यक भन्ने कुरा युवा माझ बुझाउन जरुरी भएकोले आफू खटिएर देश दौडाहामा लाग्ने प्रसाईंले बताएका छन् ।
नेता प्रसाईंले क्यानडा नेपालसंग भने, "अहिले निर्वाचनको तयारी सबै पार्टीले गर्न थालिसके तर सबैले आफ्नो भाषणमा केपी ओलीलाई र एमालेलाई गाली गरेर आफ्नो पार्टीको प्रचार गरिरहेका छन् । तर म केपी ओली किन प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तर्क सहित प्रचार गर्न अब ७ वटै प्रदेश जाँदैछु । म आफै खटीएर केपी ओलीले गरेको काम र केपी ओलीको भिजनको प्रचार गर्नेछु । मसंग हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली पनि पुगेर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ ।"
नेता प्रसाईंले भने, "मैले अध्यक्ष केपी ओलीलाई वहाँको निवास पुगेर नै भनेको छु कि अबको प्रधानमन्त्री तपाइँ नै हो र तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म देश दौडाहामा हिंड्छु, युवाहरुलाई बुझाउछु किन केपी ओली देशलाई आवश्यक छ भनेर । केपी ओलीले पनि जनताले चाहेमा एकपल्ट ५ वर्ष सम्म सरकारमा रहेर विकासको योजना अघि सार्थें र रिटायर लाईफ बाँच्थे भन्नु भएको छ ।"
दुर्गा प्रसाईंका अनुसार देशभरिका युवाहरुले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कार्यक्रम गर्नु र केपी ओली अतिथी भएको कार्यक्रमबाट हजारौं युवाहरु पार्टी प्रवेश गर्ने भन्दै फोन गरेको समेत बताएका छन् । ७ वटै प्रदेशबाट युवाहरु अहिले एमाले पार्टी प्रवेश गर्न चाहने भएकाले आफू यो अभियानमा हिंडेको नेता प्रसाईंले उल्लेख गरेका छन् ।
'कलकारखाना बेचेर युवाहरुलाई खाडी मुलुक जान बाध्य बनाउने नेपाली कांग्रेस हो'
खाँदबारीमा समेत भोली ५० हजार सहभागी हुने आकलन गरिएको छ भने हजारौं युवाहरु एमालेमा प्रवेश गर्दैछन् । प्राय सबैले केपी शर्मा ओली कै अतिथी रहेको कार्यक्रमबाट पार्टी प्रवेश गर्ने चाहना भएकाले हजारौं युवाहरु पार्टी प्रवेश गर्न तयार भएर पर्खिरहेको नेता प्रसाईंले बताएका छन् ।
नेता प्रसाई भन्छन्, "हामी ७ वटा प्रदेशको गाउँ गाउँ पुग्छौं र गाउँ गाउँमा एमालेमय बनाउछौं । हामीले बनाउन मात्र चाहेर होईन अहिले त युवाहरु नै केपी ओलीका कारण पार्टी प्रवेश गर्न चाहेका छन् । भोली खाँदबारीमा हुने कार्यक्रममा पनि तपाईहरुले देख्नुहुन्छ केपी ओलीको क्रेज ।"
पौष २५, २०७८ आइतवार १८:२६:४० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीसप खोल्ने विवादले अहिले सामाजिक संजालदेखि मिडिया तात्तिएको छ । सबैको ध्यान अहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र व्यापारिकरण बढ्यो भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको छ ।
बतास समूहले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय भित्र कफीसप खोल्ने अनुमती पाएर काम बढाईरहेको बेला एकाएक यो विवादले चर्को रुप लियो । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससंग निकट रहेको बतास समूहले मन्त्रीदेखि सरकारी तहमा सेटिंग गरेर अनुमती पाएको कुराहरु खुल्न थालेको छ । बतास समूहले समेत आफूले सरकारी तहमा मिलाएर कानून बमोजिम काम गरेको स्वीकारेको छ ।
अहिले एकाएक यो मुद्दाले चर्को रुप लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निकट रहेको बतास समूह साथै देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा आफै संलग्न रहेको बतास समूहलाई किन यत्ति धेरै विवादमा तानियो भन्ने बारे सबै तिर चाँसोको रुपमा लिईएको छ ।
यहि विषयमा नेकपा एमालेका एक शिर्ष नेताले भने, "यो मुद्दा त्यत्ति ठूलो मुद्दा किन होईन भने यदी बतास समूहले गल्ती गरेको भए खारेज गरे हुन्थ्यो नि तर यो विवादलाई लम्बाउनुको मुख्य कारण भनेको अहिले भारतले लिपुलेकसम्म सडक बिस्तार गरेको कुरालाई ओझेलमा पार्न गठबन्धनको सरकारले सबैको ध्यान नारायणहिटी तर्फ मोडिदिएको छ ।"
सरकारमा भएको कांग्रेसको निकट मानिने बतास समूह किन यत्ति धेरै लखेटियो भनेर खोज्दै जाँदा विश्लेषकहरुले समेत यहि तर्क प्रस्तुत गर्दै भनेका छन्, "शेरबहादुर देउवा भन्दा पनि आरजु देउवाको अहिले बालुवाटारमा धेरै चल्छ भनेर समाचारहरुमा पढेका छौं । आरजु देउवा आफै संलग्न रहेको बतास समूहलाई जोगाउन छोडेर किन यत्ति धेरै खेदो खनेको भन्ने खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भारतले लिपुलेकसम्म सडक खण्ड खनेको समाचारबाट ध्यान मोड्न यो विवादलाई उचालेका हुन् ।"
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक हप्ता अगाडी उत्तराखाण्डमा सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, "लिपुलेकमा सडक बनायौं, अहिले विस्तारको काम हुँदैछ ।" नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माण मात्र नभएर नयाँ नक्सामा समेत त्यो भूभाग समेटेका छन् । यो मुद्दा प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जाँदा उठाउनु पर्ने माग सामाजिक संजालमा उठिरहेको बेला गठबन्धनको सरकारले बतास समूहलाई विवादमा तानेर सबैको ध्यान लिपुलेकबाट नारायणहिटी तर्फ मोडिदिएको हो ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालले भने, "प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणको तयारी हुँदै गर्दा वहाँलाई थाहा थियो कि लिपुलेकको विषय उठाउने माग आउँछ भनेर । अनि त्यहि बेला भारतले नयाँ नक्सामा त्यो भूभाग समेट्यो र साथै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको कुरा बोलिदिए । देउवा जीलाई अब नैतिक दबाब आउने देखिएकोले सबैको ध्यान नारायणहिटी तर्फ मोडीदिन आफ्नै निकट रहेको बतासलाई विवादमा तानेका हुन् । जनता पनि अहिले नारायणहिटीको सेन्टिमेन्टमा अल्झेर लिपुलेकको मुद्दा नै ओझेलमा पारे ।"
नेकपा एमालेका नेता कृष्ण राईले गठबन्धनको सरकारमाथि प्रश्न गर्दै भने, "केपी शर्मा ओलीले नक्सामा लिपुलेकको भूभाग समेट्दा मिडियादेखि कांग्रेसका नेताहरुले नक्सामा हालेर मात्र हुन्छ भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्यो नि भन्दै एमालेको तारिफ भन्दा बढि खेदो खनेको थियो तर अहिले भारतले खुलेआम हाम्रो नक्सामा भएको भूभागमा सडक निर्माण गरेको भन्दा यो गठबन्धनको सरकार मौन छ । उल्टै बोल्नुपर्छ भनेर नारायणहिटीको विवाद निकालेर त्यो पनि एमाले कै टाउकोमा थुपारेर घिनलाग्दो राजनीति गरिरहेको छ । जनताले अब निर्वाचनमा सबै देखाईदिन्छन् ।"
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग बतास समूहको निकटता बारे बतास समूहका अध्यक्ष आनन्द राज बतासले समेत भने, "म डेमोक्रेटीक हुँ । मलाई शेरबहादुर देउवाले दुईपल्ट समानुपातिक तर्फ सांसद बन्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो तर हरेकपल्ट मैले मानिन किनभने म व्यवसायी हुँ राजनीति गर्दिन ।"
सामाजिक अभियन्ता संजिव न्यौपानेले प्राय सरकारले गरेको देश विकास विरुद्धको मुद्दाहरुलाई शसक्त रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए तर यस पल्ट आफू समेत लिपुलेकको मुद्दाबाट मोडिएर नारायणहिटी तर्फ बढी बोलेको स्वीकार्दै भने, "नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टूरेण्ट खोल्नु र व्यवसायलाई सुम्पिनु गलत हो यस विरुद्द हामी बोल्यौं र सरकारले बतास समूहलाई हटाउने भयो । तर यो भन्दा ठूलो मुद्दा यहि बेला भारतले नक्सामा हाम्रो भूभाग समेट्यो र लिपुलेकसम्म सडक बनाएको घोषणा गर्यो तर हामी यो मुद्दालाई ओझेलमा राख्यौं । कारण सरकारले बतास समूहको विवादलाई उचालेर हाम्रो ध्यान मोडिदियो । अब हामी यो मुद्दामा बोल्छौँ र सरकारलाई भारतसंग कुरा गर्न दबाब दिन्छौं ।"
गठबन्धनको सरकारमा रहेका दलहरुले अहिलेसम्म भारतले निकालेको नक्सादेखि लिपुलेकसम्म सडक बनाएको विषयलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । न गठबन्धनमा रहेको शिर्ष नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई यो विषय भारत भ्रमणमा उठाउन कुनै दबाब दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरु समेत यस विषयमा मौन छन् ।
पौष २६, २०७८ सोमवार १३:२४:२२ बजे : प्रकाशित
प्रचण्डको प्रस्तावले राजनीतिमा तरंग, चुनाव जित्न चलाखी !
काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कोरोना संक्रमित हुँदा एक साता आइसोलेसनमा बसे । कोरोना संक्रमित हुँदा उनले राजनीतिक भेटघाट बन्द गरेका थिए ।
तर उनी कोरोनामुक्त भए राजनीतिमा छुट्टै तरंग ल्याइदिए । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचण्डको नयाँ प्रस्तावका कारण राजनीतिक माहोल नै फरक भयो । प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नु भन्दा पहिले बैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने कुरामा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु पनि सहमत रहेको स्रोतको भनाई छ । तर कांग्रेसका संस्थापनइतर नेताहरु भने प्रचण्डको प्रस्ताव नरुचाएको बताइन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने यसको विरोध गरिरहेको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले गरिने कुनै पनि निर्वाचन आफूहरुले नमान्ने बताउदै आइरहेको छ ।
एमालेका नेताहरु संविधानको बाटोमै हिड्नु पर्ने भन्दै दबाब दिदै आइरहेका छन् । यसबारे छलफल गर्न बिहिबार कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका थिए । उनीहरुबीच स्थानीय चुनाव कि प्रतिनिधि सभा चुनाव पहिले गर्ने भन्ने बारे सहमती नभएपछि गठबन्धनको बैठकबाट सहमती खोज्ने प्रयास गरिएको छ।
अहिले काँग्रेससँग पनि चुनावी गठबन्धन गर्ने प्रयासमा रहेका प्रचण्ड शक्तिसाली पनि देखिएका छन् । उनी गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने दाउमा देखिन्छन् । यता, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेमा माधव कुमार नेपाल छुट्टिएपछि एमालेमा पहिरो गइरहेको छ । ओलीको कार्यबाट भीम रावल पक्ष पनि सन्तुष्ट छैन ।
माघ ७, २०७८ शुक्रवार ११:२२:१९ बजे : प्रकाशित
चितवनमा एमालेसँग तालमेल गरेर प्रचण्डलाई हराउने हल्लाबारे राजेन्द्र लिङ्देनको यस्तो खुलासा
काठमाडौं - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले हिन्दु राष्ट्र, राजसंस्था, पार्टीको झन्डालगायतका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्न संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताएका छन् । क्यानडा नेपाल डटकमसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आयोगको यो कदम संविधानको भावना र मर्म विपरित रहेको बताए ।
यसको कानुनी र राजनीतिक उपचार खोज्ने बताउदै लिङ्देनले भने - "निर्वाचन आयोगको जुन पत्र छ, यसलाई हामिले गम्भिरता पूर्वक लिएका छौं । यो संविधानको भावना र मर्म विपरित छ । खासगरी दल दर्ता सम्बन्धि संविधानको धारा २६९ ५ मा प्रष्ट सँग उल्लेख छ भने राजनितिक दलको उद्देश्य र चुनाव चिन्हले साम्प्रादायिक, धार्मिक एकतामा खलल पार्ने र खण्डित पार्ने किसिमको हुनुहुँदैन मात्र लेखिएको छ ।"
उनले आयोगले लेखेको १, ४ र ५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक रहको पनि बताए । उनले क्यानडा नेपाल डटकमसँग भने - "अन्य कुनै कारणले दलको नाम, उद्देश्य र चिन्हमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउन सक्ने कहि पनि देखिदैन । तर, दल दर्ता सम्बन्धि धारा २६९ र अर्को दल सम्बन्धि नै धारा २७० , जहाँ कुनै राजनितिक पार्टीलाई आस्थाका आधारमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था छैन । यी दुवै धाराको मर्मविपरित निर्वाचन आयोगले जुन पत्र लेखेको छ । पत्रको पनि १, ४ र ५ नम्बरको बुँदा आपत्तिजनक छ । फेरि पनि भन्छु, यो संविधानको भावना र मर्म विपरित छ । यसलाई राप्रपाले गम्भिर रुपमा लिएको छ । यसको संवैधानिक र राजनितिक उपचार खोज्छौं । "
निर्वाचन आउँदै गर्दा , यस्तो समस्या आउँदा तपाईलाई चुनौती पनि भयो नी भन्ने प्रश्नमा उनले भने - "निर्वाचन आयोगले गाई चिन्ह हटाउन भनेको छ । राप्रपाले लामोसमयदेखि राष्ट्रिय जनावर गाई राखेका छौं । यो सबै पूर्वाग्रही हिसाबले गरेको देखिन्छ । यसबारे हामिले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौं । "
यसमा तपाईहरुको केही बदलाव आउँछ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले आफूहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने पनि बताए । उनले भने - "हामि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दैनौं । संविधानले दिएको जुन सुविधा छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा कुनै पनि चीजमा अपरिवर्तनिय छ भनेर लेखिएको छैन । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघियता यी अपरिवर्तनिय होइनन् । यीनलाई परिवर्तन गरेर उद्देश्यका साथ राजनितिक दल खोल्न पाइने संविधानमा उल्लेख छ । हामि पछि हट्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।"
राप्रपालाई निष्कृय र कमजोर बनाउन खोजिएको पनि बताए । राजसंस्था देशको अवश्यकता भएकोले ढिलो चाडो स्थापना हुने उनले दाबी पनि गरे । उनले भने - "राजसंस्था देशको अवश्यकता हो । यो ढिलो चाडो स्थापना हुन्छ । राष्ट्रिय एकताको लागि राजसस्था अपरिहार्य छ । यो अनिर्वा छ , भन्ने राप्रपाका निष्कर्ष हुन्छ । राजतन्त्र ढिलो चाडो स्थापना हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।"
कुनै राजनीतिक पार्टीको लागि एउटा चुनाव हार्दैमा उसको एजेण्डा समाप्त नहुने भन्दै उनले एउटा निर्वाचन मात्र सबैथोक नभएको पनि बताए ।
उनले भने - "नेपालका राजनितिक दलहरुको बन्धक जस्तो बनेको छ देश । जनता अहिले कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीसँग सन्तुष्ट छैनन् र उनीहरुको क्रियाकलापप्रति गम्भिर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । तर भोट दिने बेलामा उनीहरुलाई नै दिइरहेका छन् । राप्रपाले यसलाई चिर्न बर्तमान अव्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टतन्त्रको कारक र तीनका बाहक कांग्रेस कम्युनिष्ट मात्र होइन हामि मतदाता पनि दोषि छौं । तपाईले दिएको भोट नै अहिलेको विकृतिको सहयोगी बनेको छ भनेर अब हामिले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।"
अब राप्रपाको नयाँ एजेन्डा के छ, राप्रपामा अब के परिवर्तन देख्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने - "राप्रपाका कुनैपनि नेता तथा कार्यकर्तालाई काम नगरि नेता बन्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौ । युवाहरुको सहभागीतालाई बढाउँदै लान्छौं । राप्रपा सबैको प्रिय पार्टी बनाउँछौं । अब राप्रपा जनताको आशा र भरोसाको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने नयाँ आशा जगाउँछौं ।"
उनले राप्रपा एमालेसँग मिल्ने कुरा भएको तर यसबारे कुनै टुंगो नलागेको बताए। उनले भने - "राप्रपा एमालेसँग मिल्ने कुरा भएको छ, तर कुनै टुंगो लागेको छैन । यसबारे हामिले कुनै धारणा बनाएका छैनौं । निर्वाचन नजिक आएपछि नै थाहाँ हुन्छ ।"
चितवनमा प्रचण्डलाई हराउने र विक्रम पाण्डेलाई एमालेसँग तालमेल गरेर जिताउने कुरा सत्य हो भन्ने प्रश्नमा क्यानडा नेपाल डटकमसँग उनले भने - "यस्ता सम्भावनाहरु सधै जिवित रहन्छ । नेपालको राजनितिमा गठबन्धको सस्कृति विकाश भएको छ । सबै राजनितित दलहरुले कसैन कसैसँग तालमेल गरेर चुनाव लडिसकेका छन् । यस्तो असम्भव छैन । तर अहिले ठाउँ बिशेष र व्यक्ति बिशेषलाई हामिले दृष्टीमा राखेर त्यस प्रकारको कुनै तयारी गरेको छैन ।"
माघ १०, २०७८ सोमवार १२:४८:१० बजे : प्रकाशित
# राजेन्द्र लिङ्देन
मेडिकल टुरिजमले नेपालको मुहार फेर्छ, सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्न दिनुपर्छ
झापा । स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको भवसागर हो । हरेक मान्छे शिक्षित हुन चाहन्छ र स्वास्थ्य रहन खोज्छ त्यसैले हाम्रो जस्तो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । मैले मेडिकल छेत्रमा लगानी गरेको अनुभवले यो लेखमा हाम्रो देशले कसरी मेडिकल टुरिजम मार्फत विकासमा कोल्टे फेर्न सक्छ भन्ने बारे चित्रण गर्दैछु ।
मेडिकल टुरिजम भनेको विदेशीहरु उपचार गर्न आफ्नो देश छोडेर अरु देश जाने गर्नु हो । आफ्नो देशबाट अर्को देश जानुको मुख्य कारणहरु खर्च सस्तो हुने, राम्रो उपचार पाउने सम्भावना र राम्रो वातावरणमा उपचार गर्न पाउनु हुन् । नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौँ नेपालीहरु भारत उपचार गर्न जाने गर्छन र त्यहि उपचार गर्ने क्रममा नजिकको शहरहरु भ्रमण समेत गर्ने गरेका छन् । भारतले मेडिकल टुरिजम मार्फत नेपालबाट मात्रै करोडौं कमाउने गरेको छ ।
मेडिकल टुरिजम ठूलो आमदानीको श्रोत हो नेपाल जस्तो देशको लागि । हाम्रो देशमा हिमाल, पहाड र तराई छ जुन संसारको धेरै कम देशमा पाईन्छ । हाम्रो देशमा उपचार गर्न वातावरणले पनि साथ दिने छ । उपचारसंगै भ्रमण गर्न सकिने अवसर भएका कारण मेडिकल टुरिजम नेपालको लागि उत्तम हुन्छ ।
हाम्रो देश यस्तो सुन्दर छ कि हरेक २० मिनेटमा फरक मौसमको आनन्द लिन सकिन्छ । यस्तो देशमा उपचार गर्न पाउनु त संसारको लागि भाग्यको कुरा पनि हो । हाम्रो हिमाल, ताल धेरै घुमाईसक्यौं अब भनेको यो देशमा उपचार गर्न विदेशी आउन र हाम्रो वातावरणसंगै घुलमिल गरेर स्वास्थ्य भएर फर्किउन ।
अब के नेपालमा मेडिकल टुरिजम सम्भव छ भन्ने प्रश्न आउँछ । अहिलेको अवस्थामा त पक्कै सम्भव छैन । मैले मेडिकल छेत्रमा लगानी गरेको छु तर सरकारबाट सहयोग पाएको छैन । म जस्तो व्यवसायीलाई सरकारले मेडिकल टुरिजमको महत्त्व बुझेर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । तर दुखद कुरा म आफै कलेज चलाउन नेपालको राजनीतिसंग लडिरहेको छु ।
सरकारले मेडिकल टुरिजम बारे बुझ्न जरुरी छ । मैले एमाले पार्टी प्रवेश गरेपछि मेरो अध्यक्षलाई यस बारे बुझाएको छु । अब म मेरो लेख मार्फत अरु पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई पनि बुझाउन खोज्छु यस बारे । मेडिकल छेत्रमा लगानी गर्न सके मेडिकल टुरिजमसंगै रेमिट्यान्सबाट पनि कमाउन सकिन्छ जुन विषयमा म अर्को लेखमा भन्ने छु । अहिले मेडिकल टुरिजम कै कुरा गरौँ ।
मेडिकल टुरिजम अहिले सम्भव छैन किनकि अझै पनि हाम्रो विधार्थीहरु मेडिकल पढ्न विदेश जाने गर्दछन । तपाईहरुलाई थाहा नहोला विदेश पढ्न जानु हाम्रो विधार्थीहरुको वाध्यता हो । बंगलादेशदेखि भारत पढ्न जान बाध्य छन् नेपाली विधार्थी र यो बाध्यताका कारण महँगोमा मेडिकल शिक्षा लिनुपरेको छ ।
महँगोमा पढेर आएपछि महँगो पारिश्रमिक लिन पर्यो जसका कारण पनि नेपालमा अहिले मेडिकल अलि महँगो भएको हो । तर यदि सरकारले मेडिकल माफियाको गिरोहलाई समातेर विदेश पढ्न पठाउन रोक्न सकिन्छ तर त्यसका लागि मेडिकल कलेजलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । मेडिकल कलेजलाई मापदण्डमा राखेर चलाउन दिनुपर्छ जसका कारण करोडौं पैसा बाहिरिदैन पनि र नेपाल मै मेडिकल शिक्षा दिन सकिन्छ ।
मेडिकल शिक्षा नेपालमा सम्भव बनाएपछि उपचार नेपालमा सस्तो हुन्छ । हामीसंग दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् र उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ । हामीले सस्तोमा उपचार दिन सक्छौं जसका कारण विदेशबाट उपचार गर्न विदेशीहरु आउछन । उपचारसंगै नेपाल भ्रमण पनि गर्छन ।
हाम्रो देश सगरमाथा र बुद्धसंगै मेडिकलले पनि विश्वमा चिनिन्थ्यो । तर यसका लागि पहिला सरकारले बुझ्न जरुरी छ र यस छेत्रका विज्ञहरुलाई राखेर गुरु योजना बनाउन जरुरी छ । एमालेको सरकार आएपछि मेरो पहिलो पहल भनेको मेडिकल टुरिजम नै हुनेछ ।
माघ ११, २०७८ मंगलवार २०:२२:०२ बजे : प्रकाशित